Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Atụmatụ. Ònye ga-akwụ ụgwọ?.
Ònye Ụgwọ Ọrụ On A mbụ Ụbọchị?
emelitere ikpeazụ: Oct. 18 2019 | 3 min agụ
Unu na-akpọ m “Sugar”
A afọ ole na ole gara aga, M wee na a nwaanyị ugboro atọ a di na nwunye nke izu. M ugwo maka ihe niile, gụnyere iri na abuo bagels otu Sunday ụtụtụ mgbe ọ ghọtara o ga-echefu ya obere akpa. Ọ na-eji mmesapụ aka chụọrọ bulie ọzọ ụbọchị.
Ọ na-akpọ m na-arụ ọrụ na-esote ụbọchị ịgwa m na ọ nụrụ nke a play na dara dị ka fun. O kwuru na ya nọ na jụrụ m ma m nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na e nwere tiketi dị. Nsogbu adịghị. M na-akpọ ụlọ ihe nkiri na mụtara na ọ bụ nanị isii ekpe. Gịnị bụ a Ihọd ime? Ọ dịghị nnukwu ihe, M zụtara a ụzọ tiketi na kwubiri na ọ ga-bulie nri abalị tupu anyị wee si.
Mgbe anyị $40 nri, ọ na-etinye ala ya kaadị ala wee gaa na-asa ahụ. Mgbe ọ bịara azụ, ọ chọpụtara na m na-emeghị-etinye na kaadị akwụmụgwọ m ịtụtụrụ ma ọ bụ kewaa ego. Mgbe nke o glared na m ma sị m, na a ton nke elò na ọ bụghị a shred nke asusu: 'Gịnị ka m, gị sugar mama?!’
Yeah, ịbụ a Ihọd bụghị mgbe niile kasị akwụghachi ụgwọ ihe na ụwa. Ma ihe ị na-etinyecha eme? M na kwụsịrị na-eche banyere ihe bụ ihe “ngosi” na kpebiri na ịmakụ usoro m na ketara. Na nke a usoro, a Ihọd akwụ doro anya na, ma ọ bụrụ na a nwaanyị awade-akwụ, ọ na-azọrọ na e asị na ọ dịghị. Dịkarịa ala na mbụ ole na ole ụbọchị. Ma ọ bụ ka ogologo oge ọ na-ịbụ courted. Ma ọ bụ eleghị anya mgbe niile. Ọ na-adabere nwaanyị. Anyị nwere ike mgbe mara gwụla ma anyị ka ala anyị nche na-ekwe ka ya ịtụtụrụ a ego. Ma na mgbe ahụ,, ọ bụ mgbe akaha ziri ezi gị egalitarian omume.
Nke a bụ a enwe ihe ijuanya banyere nile ziri ezi na ọ dịghị onye nri azịza. Dị ka a Ihọd onye meela on nnọọ ọtụtụ ụbọchị, M nụrụ niile akụkọ si n'akụkụ abụọ ahụ na ihe ọ bụla n'akuku. Ma ebe ọ bụ na mgbagha adịghị ka nweta ọtụtụ play a n'ógbè, M na-etinyecha-enye ya ụfọdụ ihu oge.
IHE NDỊ MMADỤ NA-EKWU:
ya: O kwesịrị ịchọrọ ịkwụ ụgwọ m.
Ee, na, n'ozuzu, nke ahụ bụ ikpe. Na-emesapụ aka, karịsịa ka onye ị hụrụ n'anya, bụ ihe ịrịba mmetụta – nri n'ebe ahụ, M na-gwara, na ebe ihe niile akwụ ụgwọ ha site na onye ọzọ.
Ya: Ọ na-atụ anya m na-akwụ ụgwọ maka ihe nile.
Ee, na nke ahụ bụ nweela na e guzobere n'ụzọ tupu a mụrụ gị. Adịghị ya ọgụ, naanị mee ya na a ọnụ ọchị, eme ka ọ bụrụ na ị, ị na-agaghị na-ọzọ ụbọchị.
ya: Ọ gākwughachi, karịsịa ná mmalite.
Nke a mgbagha bụ obere dicier. Gịnị mere otu nwoke na-akwụ? N'ihi na ọ bụ chivalrous? -Atụle na chivalry malitere mgbe mmadụ na-arụ ọrụ na ndị inyom mere abụghị. Women, n'ụzọ nkịtị, enweghi ike ịkwụ ụgwọ. N'ihi ya, ndikom buru n'elu nlele sprung n'ihi mkpa, ọ bụghị n'ihi ebere. Ya kemgbe ahụ codified n'ime a nwa amadi si code, nke a na-ewere na ogbenye uto na-ajụ. M na ọ bụghị na-ajụ ajụjụ, ma hụ otú iwe ị bụ na m na-ọbụna na-eweta ya?
Ya: Ma ọ jụrụ m.
Gịnị mezie? Ọ bụrụ na iwu oru na-ekwu na ị na-akwụ maka nke mbụ ụbọchị, na ọ na-atụ anya na ị na-akwụ maka nke mbụ ụbọchị, na i nwere ike imeli iji kwụọ ụgwọ maka nke mbụ ụbọchị, mgbe ahụ ịkwụ ụgwọ maka m achọ ịma mbụ ụbọchị.
ya: Ọ dịghị mkpa bụ ihe ọ na-eme. A amadi-abakarị uru.
Ọ bụrụ na a Ihọd na-eme ka a ton ego, M nwere ike obi sie gị, ọ bụ ya zuru ọṅụ na obi ụtọ pulite nke ọ bụla ikpeazụ ọṅụṅụ na spa ọgwụgwọ na-emeso gị dị ka eze gị doro anya bụ. Ma, e nwere nnukwu ọdịiche n'etiti ịbụ ọnụ ala ma na ịbụ ogbenye. Cheap pụtara Ihọd jụrụ ya ụbọchị ịkwụ ụgwọ maka azụ mgbe o nyere iwu na-adịchaghị oké ọnụ ọkụkọ. Ogbenye pụtara na Ihọd ka nsogbu na-eme ụlọ ma ọ bụrụ na o nwere iji kwụọ ụgwọ maka ise ụbọchị na a ọnwa. Tinye onwe gị n'ọnọdụ ya: ọ bụ ike ịta ya ụta maka chọrọ ọzọ ndenye ego.
My ngwọta bụ, Ọ bụghị ihe ijuanya, ihe equivocation. Ka niile na-agbalị ịghọta ibe. Okorobịa, ka na-emesapụ aka dị ka o kwere, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-atụ anya ka ị na-, ma n'ihi na ọ bụ ezi na-akwụghachi ụgwọ “na-Ihọd” na-eme ka ndụ dịkwuo mfe na ya. Women, na-ọmịiko ka grad amụrụ ma ọ bụ nkụzi na-adịghị enwe n'aka dị ka chivalrous ka ọ ga-amasị na-. Ị nwere ike anyị sugar mamas, ma biko adịghị eji ya egwuri egwu na anyị na-gị igwe ndọrọ ego si, dịkwa mma?